Receptionist Archives - Glory Assumption Space
Receptionist – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Receptionist – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်/တာမွေမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလဲလျှော်ထားနိုင်ပါသည်။ - အသက်(၂၀) မှ (၂၅) ကြားရှိသူဖြစ်ရမည်။ - တက်တက်ကြွကြွဖြင့် သင်ယူချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Receptionist – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Hotel တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 3. Receptionist – Female (5)Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်/ နေပြည်တော်မြို့နယ်။ - Graduate (or) Certificate Holder - Experienced in Front Office is perferrable - Salary + Service Money မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Receptionist – Female (5) Posts
Receptionist (Hotel & Restaurant) - Male/ Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Hotel တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။ (4) / Salary – 200,000 Kyats / Pazundaung Township • တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၂၀)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ • သင်ယူလိုစိတ်၊ ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိရမည်။ • မိမိတာဝန်ကျသောအချိန်အတိုင်း အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည်။ • Computerအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • စကားပြောယဉ်ကျေးရမည်။ • အင်္ဂလိပ်စကားအနည်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Receptionist - Female (5) posts / Salary - 150,000 Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကမာရွက်မြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1. Receptionist - Female (5) posts / Salary -150,000 Above Kyat / Kamaryut Township . - အသက် (၁၈ - ၂၂) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - Skin Care ပိုင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လူမူဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမော၍ အပြောအဆိုချိုသာပြီး သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - သင်ယူလိုချင်စိတ်သူဖြစ်ပြီး နာခံတတ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Receptionist - Female (10)posts / Salary - 130,000 Kyat .
**********************Urgent Requirement********************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော နေပြည်တော်တွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1.	Receptionist -Female (10)posts / Salary – 130,000 Kyat . Nay Pyi Taw Division . -	ဆယ်တန်းအောင် ( သို့ ) ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ -	Computer Basic ကိုအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -	စကားပြောပြေပြစ် သူဖြစ်ရမည်။ -	သက်ဆိုင်ရာနှင့်ပက်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Reception - Male /Female (5)Posts
******************** URGENT REQUIREMENT ******************* ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Reception – M/F (5) Posts/Salary – 120000 Kyats/Mingalar Taung Nyunt Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၀ နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ -Training ပေးမည်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ - English စကားနည်းနည်းပြောနိုင်ရမည်။ Emailဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက် ထား နိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com , gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Receptionist - Female (5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော co.,တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ Receptionist - Female – (5) Posts / Salary – 150000 Kyats / Mingalar Taung Nyunt Township Requirement 1. Must be graduate person 2. Age Between 20-25 years old 3. Be able to use Microsoft word, Excel, PowerPoint and e-mail 4. Be able to speak English well 5. Flexible mindset. (This meant not stubborn) 6. Good personality and good communication with other person. Emailဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com , gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Receptionist - Female (5) posts
Any Graduate Age below 23 years age At least height 5’4”, good personality Minimum (1) year experience in related admin field and must be able to travel Must be computer literate and familiar with email, Microsoft office If necessary can work overtime and travel
Receptionist -Female/Male (2 )posts
ဘွဲ့ ရ ( သို့မဟုတ် ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) အထက်ရှိရမည်။ English (4 ) Skills ရမည်။ Hotel သင်တန်ဆင်းလက်မှတ် ရှိသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံများပါ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ……………